မိုဘိုင်းဖုန်းလမ်းညွှန် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label မိုဘိုင်းဖုန်းလမ်းညွှန်. Show all posts
အိုင်ဖုန်း အသုံးပြုတော့မယ် ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၁ – အိုင်ဖုန်းကို အခုမှ စသုံးမယ့် သုံးစွဲသူတွေ အတွက် သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
အိုင်အိုအက်စ် ဖုန်းတွေ ကတော့ ပက်ကင် ပိတ်နဲ့ လာတာ ဖြစ်ပေမဲ့ အာမခံ warranty ပေးတာကြောင့် မိမိ အနေနဲ့ အောက်ပါ အချက်တွေနဲ့ စစ်ဆေး ကြည့်နိုင် ပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းမှာ အဓိကအရေးပါတဲ့ အ ပိုင်းတစ်ခုကတော့ ကင်မရာပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာကို ကျောဘက်၊ ရှေ့ဘက်အကုန်စစ်ပါ။ အိုင်ဖုန်းဝယ်ယူတဲ့အခါ ပက် ကင်ပိတ်ဖြစ်တာကြောင့် စမ်းသပ်လို့ မရပေမဲ့ ဝယ်ယူတဲ့နေ့မှာပဲ ချက်ချင်းတစ်စုံ တစ်ခုကို ရိုက်ကူးပြီးစစ်ဆေးပါ။
ဥပမာ – အလင်းရောင်ရတဲ့ နေရာတွေမှာ ကင်မရာကြည်လင်လား၊ အလင်း အရမ်းများနေလား၊ အလင်းနည်းတဲ့ ဘက်တွေမှာ ဘာမှမမြင်ရပဲဖြစ်နေလား၊ focus ဖြတ်လို့ရလားစတာတွေကို အသေးစိတ်ရိုက်ပြီးစစ်ပါ။
အိုင်ဖုန်းမှာ အဓိက အစိတ်အပိုင်းက တော့ အတွင်းပိုင်းဖီးချားတွေကို သေချာစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲတွေ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ စက်ဟန်းတာတွေ စက်လေးတာတွေ ဖြစ်မဖြစ်စတာတွေ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အက်ပဲလ်ဖုန်းတွေမှာ အဓိကအရေး ပါဆုံးဖြစ်တဲ့ Apple ID ကို စစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းအသစ်ဝယ်ယူသူတွေအနေ နဲ့ကတော့ Apple ID မရှိဘူးဆိုရင်ဆိုင်မှာ မိမိရဲ့ အီးမေးလ်နဲ့ အကောင့်သွားလုပ်လိုက်ပါ။
အဲသည် Apple ID ရှိမှသာ အပလီ ကေးရှင်းဒေါင်းလုပ်ဒ်ဆွဲတာတွေ၊ တခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ID အကောင့်တောင်းတာမျိုးတွေ၊ အွန်လိုင်းရှော့ပင်း ကနေ ဝယ်ယူတာမျိုးတွေကို ID နဲ့ ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အိုင်ဖုန်းကို တစ်ပတ်ရစ် (secondhand) ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ Apple ID အကောင့်က တခြားသူရဲ့ အကောင့်ဖြစ်နေရင် ဝယ်ယူခဲ့တဲ့သူဆီက တောင်းပါ။ မဟုတ်ရင် ဆားဗစ်ဆိုင်ကို သွားပြပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ siri ကို စစ်ပါ။ siri ဆိုတာကတော့ အသံနဲ့ ထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ siri က နေ အင်တာနက်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာ ရှာတာ မျိုးတွေ၊ ဖုန်းခေါ်၊ မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ တာမျိုးတွေ စတဲ့အချက်တွေကို ပါးစပ်က နေအော် ပြီး ချပြခိုင်းတာမျိုးဖြစ်တာ ကြောင့် siri ကနေ အလုပ်လုပ်မလုပ် သေချာ စစ်ဆေးပါ။ ဖုန်းရဲ့ home key ကို အကြာကြီး နှိပ် ရင် siri ပေါ်လာပါတယ်။
နောက်ပြီးဂိမ်းတွေ၊ အက်ပ်တွေ အလုပ်လုပ်မှုရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ။ အသံပိုင်း စပီကာတွေကိုလည်း စစ်ဆေးပါ။
အိုင်ကျွန်းကတော့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ပြီး ဒေတာအလွှဲအပြောင်းလုပ်တာတွေ၊ back up လုပ်ထားတာမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာထဲက အိုင်ကျွန်း (i Tune) နဲ့ အက်ပဲ အိုင်ဖုန်းရဲ့ ဗားရှင်းတွေတူညီအောင် အပ် ဒိတ်လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
သတိထားရမှာက အိုင်ကျွန်းကနေ သီချင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေစတဲ့ဒေတာတွေ အလွှဲအပြောင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့သာ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲရှိ အိုင်ကျွန်းနဲ့ ဒေတာလွှဲပြီး နောက်ထပ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိ အိုင်ကျွန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါက ဖုန်းထဲရှိ ဒေတာ အကုန်လုံး ပျက်ကုန် တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အက်ပဲလ်ကုမ္မဏီက လုံခြုံရေး အရ သည် စနစ်ကို လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်က IMEI ကုတ်နံပါတ်စစ်ဆေးပါ။ ကုတ်နံပါတ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အိုင်ဖုန်းရဲ့ နောက် ကျောဘက်ရဲ့ အောက်မှာ ကုတ်ကို အမြဲ ဖော်ပြထားလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဖုန်းခေါ်တဲ့ icon ကနေ လည်း ကြည့်နိုင် ပါတယ်။ *#06# ဍ ဆိုပြီး ဖုန်း ခေါ်လိုက်ရင် IMEI ကုတ်ကို ဖော်ပြ ပေး မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုတ် နံပါတ်က ၁၅ လုံး ရှိ ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ sim card tray လို့ခေါ်တဲ့ အိုင်ဖုန်းတွေမှာ ဆင်းမ်ကတ်ထည့်တဲ့အပြားလေးပေါ်မှာ IMEI ကုတ်ပါဝင်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ ဖုန်း setting ထဲကနေကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ setting>general>IMEI ထဲကနေ လည်း ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အိုင်ကျွန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့ အခါမှာလည်း IMEI ကုတ်ကို အိုင်ကျွန်း မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ကုတ်နံပါတ် အစစ်အတုဟုတ် မဟုတ် အင်တာနက်ကနေ ရှာပြီး စစ်ဆေးပါ။ ဘရောက်ဇာကနေ www.imei.info ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကျ လာရင် enter imei ဆိုတဲ့ စာရိုက်ရမယ့် ဘောက်စ်အတွင်းထဲမှာ မိမိရဲ့ IMEI ကုတ် နံပါတ် ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဖုန်းက အတု ဒါမှမဟုတ် တရားမဝင်တဲ့ဖုန်းဆိုရင် ဝwrong code လို့ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပြီး အစစ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်နိုင်ငံက ထုတ်တယ်ဆိုတာကိုပါ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အိုင်အိုအက်စ် ဖုန်းအပ်ဒိတ်မော်ဒယ်တွေဖြစ်တဲ့ iPhone 6S, iPhone 6S Plus နဲ့ သည် နှစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ iPhone 7, iPhone7Plus တို့မှာပါဝင်တဲ့ သရီးဒီတာ့ခ်ျ (3D touch) ကို စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သရီးဒီတာ့ခ်ျကိုစစ်ဖို့အတွက် စာရိုက်တဲ့အခါ cursor ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ရာအတွက် Apple ရဲ့ iOS ကီးဘုတ်ကို သေချာဖိထားပါ။ ပြီးရင် စခရင်ရဲ့ ဘယ်ဘက် ထောင့်စွန်းကို သေချာဖိထားပြီး အလယ်ကို ဝိုက်ဆွဲချလိုက်ရင် အက်ပ်တွေဖွင့်တဲ့ UI ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝိုက်ချစရာ မလိုဘဲ သေချာလေးဖိထားရုံနဲ့ app switcher ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုတီဖီကေးရှင်းတွေတက်နေတဲ့ အက်ပ်တွေစုထားတဲ့ folder ကို ဖိထား လိုက်ရင်တော့ menu တစ်ခုပေါ်လာပြီး အက်ပ်တစ်ခုချင်းရဲ့ notification တွေကို notification တွေနဲ့ ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ App Store icon ပေါ် သေချာဖိထားလိုက်ရင် အပ်ဒိတ်လုပ်လို့ရ နိုင်တဲ့ အက်ပ်တွေကို အလွယ်တကူ up-date လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးကတော့ notification center မှာ ‘X’ လေးနှိပ်ထားလိုက်ရင် notification တွေ အကုန်လုံးကိုရှင်းပေး မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်လိုတစ်ဆင့်ချင်း စစ်ပြီး အလုပ်လုပ်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
ဖုန်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုံခြုံမှုရှိစေအောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် အိုင်ဖုန်း အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ system and security info app ကို သုံးသင့်ပါတယ်။
သည်အက်ပ်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အိုင်ဖုန်းကိုခြေရာခံပြီး လိုက်နှောင့်ယှက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေက ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အက်ပဲလ်ဖုန်းတွေအတွက် လုံခြုံရေး မြှင့်တင်ထားတဲ့စနစ်ကို အက်ပဲလ်က အိုင်ဒီတွေနဲ့ ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ ဟက်ကင်းလုပ်တဲ့စနစ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ စနစ်ကိုတော့ ရာနှုန်းပြည့်ကာကွယ်ထားတာမျိုး မရှိ ပါဘူး။
အိုင်ဖုန်းမှာ system and security info app ကို အင်စတောလ် လုပ်ထားရုံနဲ့ တိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့ ဖောက်ထွင်းနှောင့်ယှက်ခြင်းတို့ကနေ ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဒေါ်လာသာ ရှိတဲ့ သည်အက်ပ်ကို အိုင်ဖုန်းမှာ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဟက်ကာတွေရဲ့ နှောင့်ယှက်မှု ရန်တွေကနေ ကာကွယ် နိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သည်အက်ပ်က တိုက်ခိုက်သူတွေ နှောင့်ယှက်တဲ့ ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးရုံသာမက တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ process running ဖြစ်နေတာတွေကိုပါ အစီအစဉ်တကျ ဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးပါ တယ်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ (privacy) ဒါမှ မဟုတ် လုံခြုံရေးပိုင်းတွေအတွက် ထူး ခြားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အပြည့်ပါဝင်ပါ တယ်။ ဒေါင်းလုပ်ဒ်မယ် ဆို ရင် တော့ http://www. apple. com/ de/ itunes/affiliates/ download/ မှာ ဆွဲလို့ ရပါတယ်။
ကဏ္ဍ စမတ်ဖုန်းအကြောင်း, မိုဘိုင်းဖုန်းလမ်းညွှန်
ဆမ်ဆောင်း S8 နဲ့ အိုင်ဖုန်း7ဘယ်လို ရွေးကိုင် သင့်သလဲ
စမတ် ဖုန်းကို လုပ်ငန်းသုံး ဖြစ်စေ၊ တခြား အရာ တွေကြောင့် ဖြစ်စေ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမယ့် အမျိုး အစားကို သေချာ ရွေးချယ် သင့်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ နာမည်ကြီး နေတဲ့ ဆမ်ဆောင်း S8 နဲ့ အိုင်ဖုန်း7တို့ကို ဘယ်လို ရွေးကိုင် သင့်တယ် ဆိုတာ ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ်။
လက်ရှိကမ္ဘာမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်နေတဲ့ အိုင်ဖုန်းဆဲဗင်းနဲ့ ဆဲဗင်းပလတ်စ်ဖုန်းကို လုပ်ငန်းအဖြစ်သုံးဖို့ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
စီးပွားရေးနဲ့ လုပ်ငန်းသုံးတွေ အတွက် အသုံး ဝင်စေ တာကတော့ အိုင်ဖုန်းရဲ့လုံခြုံမှု security ပိုင်းက ဘယ်စမတ် ဖုန်းနဲ့မှ ယှဉ်လို့ မရအောင် လုံခြုံမှု ရှိစေ တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာဒေတာ အချက် အလက်တွေကို တိုက်ခိုက် သူတွေ တော်ရုံ မဖောက်နိုင်ခြင်း၊ စာရွက် စာတမ်းတွေနဲ့ ဖိုင် document တွေကို ဖုန်းထဲ အလွယ် တကူ သိမ်းနိုင်ခြင်း၊ မမ်မိုရီ 256 GB ပါဝင် တာကြောင့် အချက် အလက် မှတ်တမ်းတွေကို စိတ်ကြိုက်ထည့် သွင်းနိုင် တာကြောင့် လုပ်ငန်းပိုင်း အတွက် အဆင်ပြေ စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းဆဲဗင်းမှာပါဝင်တဲ့ ကင်မရာပစ်ဇယ်နဲ့ရုပ်ထွက်သာလွန်တာ ကြောင့် သတင်းသမားတွေအနေနဲ့ သတင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာ ကင်မရာယူသွားစရာမလို၊ အသံဖမ်းစက်ယူသွားစရာမလိုဘဲ ဖုန်း တစ်လုံးတည်းနဲ့ အရာအားလုံး လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်သံသမားတွေအနေနဲ့ ကင်မရာမေ့ကျန်ခဲ့လို့ဖြစ်စေ၊ ကင်မရာ ယူသွားလို့မရတဲ့ နေရာတွေမှာ အိုင်ဖုန်းဆဲဗင်းနဲ့မိုက်ခ်အသေးစား၊ ထရိုင်ပေါ့ဒေါက် သို့မဟုတ် ဆယ်ဖီစတစ်ပါရုံနဲ့ ရုပ်သံပိုင်းကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောဘက်မှာပါတဲ့ ကင်မရာနှစ်စုံဟာဆိုရင် ရိုက်ကူးမယ့်မြင်ကွင်း ကို မြင်ကွင်းအကျယ်ချဲ့ရိုက်ဖို့အတွက် eideangle ကင်မရာနဲ့ တယ်လီဖိုတိုကို switches လှည့်သုံးနိုင်ပြီး ဇွန်းမ်နှစ်ဆချဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်။
အိုင်အိုအက်စ်တန်းဗားရှင်းပါဝင်လာတာကြောင့် ဆီရီနည်းပညာတွေ မြှင့်လာပြီး လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အရင်ဖုန်းမော်ဒယ်တွေထက်ပိုပြီး အားသာ လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းဆဲဗင်းနဲ့ အိုင်ဖုန်းဆဲဗင်းပလပ်စ်နှစ်မျိုးလုံးရေစိမ်ခံဖြစ်ပါတယ်။ ရေစိမ်ခံဖုန်း ဖြစ်တာကြောင့် ရေကူးကန်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေ တဲ့သူတွေအတွက်လည်း ရေစိုခံအိတ်မလိုဘဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။
နောက်ပြီး ဂိမ်းကစားရတာကို ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အိုင်ဖုန်း ဆဲဗင်းကိုရွေးသင့်ပါတယ်။ အိုင်ဖုန်းမှာ ဂိမ်းတွေကို run တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က အိုင်ဖုန်းမှာအမြင့်ဆုံးပါပဲ။
ဆမ်ဆောင်း S8 ကတော့ လက်ရှိ အနေ အထား အရ နည်းပညာ တိုးတက်မှု အပိုင်းက အိုင်ဖုန်းကို တန်းတူ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းကိုယ်ထည် တစ်ခုလုံးမှာ မှန်စခရင်က အပြည့် နီးပါးနေရာ ယူထား တာဖြစ်ပြီး ဆမ်ဆောင်းရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ထဲမှာ ပထမဆုံး Home Key မပါတဲ့ စမတ်ဖုန်း အဖြစ်ထွက်ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်း မော်ဒယ်လ်နှစ်မျိုးလုံးရဲ့ ကိုယ်ထည် တွေကဆိုက်ပဲကွာမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ဖီးချားအကုန်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ သုံးနေကျ သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် ဖုန်းဖြစ်ပါ တယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်မျိုးလုပ်ကိုင်တဲ့ အခါ ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့ မရှိလည်း ဖုန်းနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သည် S8 မှာ Samsung Dex (Samsung Desktop Experi-ence)လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာလည်းပါဝင်လာပါတယ်။ Samsung Dex က မိုဘိုင်းလ်ကနေ ကွန်ပျူတာ ပီစီမှာ ကူးပြောင်း ချိတ်ဆက်နိုင်တာ ကြောင့် S8 ဖုန်းကို desktop ပေါ်မှာတင် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်း ဒိုးစ်ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့တွေမှာ တွဲရက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် office နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအပြင် Adobe /Photoshop စတာတွေကိုပါ ဖုန်းနဲ့တင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂလက်ဇီဖုန်းတွေရဲ့လက်ဗွေရာဆန်ဆာနဲ့ မည်သည့် windows 10 လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာကိုမဆို လော့ခ်ဖြည်တာတွေ၊ နိုတီဘား တန်းကြည့်တာတွေနဲ့ တခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
နောက်ပြီး Samsung S8 က သီချင်းပိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်သူတွေ အတွက်အသုံးဝင်နိုင်သလို သီချင်းအပုဒ်ရည်များများ စုဆောင်း တတ်သူတွေ၊ သီချင်းဂီတကို ဝါသနာပါသူတွေအတွက် အကြိုက် တွေ့စေမယ့်ဖီးချားကိုလည်း မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
Android Phone ကို ကားရဲ့ Audio System နဲ့ ချိတ်ဆက်နည်းများ
ယာဉ်မောင်းသူ အများစုက ကားမောင်းနေစဉ် သီချင်းများကို နားထောင် ခံစားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေဒီယိုများက သင်နားထောင် ချင်တဲ့ သီချင်းကို ဖွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
CD တွေကလည်း ပျက်ဆီးလွယ်တဲ့ အတွက် အဆင် မပြေပါဘူး။ Android Phone မှာ စိတ်ကြိုက် သီချင်းများစွာ ထည့်သွင်း ထားသူများ အတွက် ဖုန်းမှ သီချင်းများကို ကားရဲ့ Audio System နဲ့ ချိတ်ဆက် နားထောင် ချင်ရင် နည်းလမ်း များစွာ ရှိပါတယ်။
လူအများစု အသုံးပြုကြတာက 3.5mm Mini Jack Cable ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးရဲ့ တစ်ဖက်ကို သင့်ဖုန်းရဲ့ Headphone Jack မှာ တပ်ဆင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဖက်ကို ကားရဲ့ Audio System မှာ တပ်ဆင် ရမှာပါ။ ဒီလို ချိတ်ဆက်ဖို့ နည်းများစွာ ရှိပါတယ်။ Car Audio System ရဲ့ အရှေ့ဖက် သို့မဟုတ် Dashboard ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
Cassette Tape Player တပ်ဆင် ထားတဲ့ ကားများမှာတော့ Cassette Adapter ကို အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး MP3Player သို့မဟုတ် ဖုန်းမှ Headphone နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင် ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းမှ သီချင်း များကို ကားရဲ့ စပီကာ ကနေ ခံစားနားထောင် နိုင်ပါပြီ။ ဖုန်းမှသာ မက အင်တာနက်မှ သီချင်းများ ကိုတောင် နားဆင်နိုင် ပါတယ်။
ခေတ်ပေါ် ကားများရဲ့ Audio System မှာ Bluetooth ပါရှိ ကြပြီး သင့်ဖုန်းနဲ့ ချိ်တ်ဆက် အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ ဒီလို ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက် သင့်ကားရဲ့ Audio System မှ Bluetooth ကိုဖွင့်ပါ။ Discoverable ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ Android Device မှာ Settings>Wireless and Networks>Bluetooth Settings ထဲသွားပြီး Bluetooth ကိုဖွင့်ပါ။ Scan ပြုလုပ်ပြီး ကားရဲ့ Audio System ကို ရှာဖွေပြီး Pair လုပ်ပါ။
Bluetooth ရဲ့ အားသာချက်က တစ်ခါသာ ချိတ်ဆက် ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ချိတ်ဆက်စရာ မလိုတာပါ။ အားနည်းချက်က သင့်ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီကို အကုန်မြန်စေတာပါ။ ဒီနည်းနဲ့ သီချင်းနားထောင်ရင်တော့ ကားထဲမှာ ဖုန်းကို အားသွင်းထားရင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမှသာမက အင်တာနက်မှ သီချင်းများနဲ့ ရေဒီယိုများကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
Bluetooth လိုပဲ ခေတ်သစ်ကားအချို့ရဲ့ Audio System မှာ ပြင်ပ Storage Device များကို ချိတ်ဆက်နို်င်တဲ့ USB Cable ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီကြိုးကနေ သင့်ဖုန်းနဲ့ ကားရဲ့ Audio System ကို ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး သီချင်းများ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ချိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့ သင့်ဖုန်းမှာ Storage Mode ကိုပြောင်းပေးရမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Notification Bar ကို ဆွဲချပြီး USB Mass Storage သို့မဟုတ် USB Connection Mode ကို ပြောင်းပေးပါ။ ဒါကတော့ ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး အခေါ်အဝေါ် ကွဲပြားပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ကားရဲ့ Audio System မှာ ဖုန်းမှ သီချင်းများကို တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ။
ဒီနည်းလမ်းရဲ့ အားနည်းချက်က သင့်ဖုန်းမှာ သိမ်းထားတဲ့ MP3 သီချင်းများကိုသာ နားထောင်နိုင်တာ ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်မှ သီချင်းများကို နားဆင်လို့ မရတာပါ။ ဒါပေမယ့် သီချင်းနားဆင်နေစဉ်မှာ ဖုန်းကို အားသွင်းပေးနေမှာပါ။
အချို့ ဖုန်းများမှာ FM Transmitter စွမ်းဆောင်ချက် ပါရှိပါတယ်။ ဒါကို အသုံးပြုနိုင်သလို Quick FM Transmitter လို App များကို အသုံးပြုပြီး သင့်ဖုန်းမှ သီချင်းများကို ကားရဲ့ စပီကာကနေ နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းက ဈေးနှုန်း သက်သာတဲ့ FM Transmitter ကိရိယာကို ၀ယ်ယူရမှာပါ။ အဲဒီ ကိရိယာကို ဖုန်းရဲ့ Headphone Jack မှာ တပ်ဆင်ရမှာပါ။ အလုပ်လုပ်ပုံက Analogue Cable နဲ့ တူညီပေမယ့် FM Transmitter ကို ကားရဲ့ အားသွင်းစက်မှာ တပ်ဆင်ထားရမှာပါ။
ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်း များစွာ ရှိပေမယ့် အများစုက Analogue Cable , Cassette Adapter တို့ကို အသုံးပြုနေ ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကားရဲ့ Audio System မှာ Bluetooth ပါရှိတယ် ဆိုတာ မသိကြလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Cassette Player များ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကားအဟောင်းများ အသုံးပြုနေ ကြလို့ ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကားမှာ Digital Sound System ပါရှိတယ် ဆိုရင် Analogue Cable နည်းလမ်းဟာ အသံ အရည်အသွေး အပြည့်အ၀ မရနိုင် တာကို မှတ်သားထားပါ။
Myanmar digital life By Thu Ya
Original link - http://www.myanmardigitallife.com/?p=4493
စမတ်ဖုန်းမှာ လက်ချောင်းများနဲ့ စာရေးနိုင်မယ့် Google Handwriting Input
စမတ်ဖုန်းမှာ On-Screen Keyboard တွေနဲ့ စာရိုက် ရတာကို မနှစ်သက်ဘဲ လက်နဲ့ စာရေး ရတာကို နှစ်သက် သူများ အတွက် Google က Google Handwriting Input App ကို ဖြန့်ချီပေး ထားပါတယ်။
ဘာသာစကား ၈၂ မျိုးနဲ့ စာရေး သားနိုင် ပါတယ်။ လက်ချောင်း အပြင် Stylus နဲ့ပါ ရေးသားနိုင်တဲ့ အတွက် Stylus ပါတဲ့ ဖုန်းများမှာ ဆိုရင် ပိုမို အဆင်ပြေ ပါတယ်။
စာသားများ အပြင် Emojis များကိုပါ လက်နဲ့ ရေးသားနိုင် တာက ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်။ Voice Input လည်းပါရှိပြီး စကားပြောပြီး စာရေးသား နိုင်ပါတယ်။ Google Handwriting Input ရဲ့ လက်ရေးများကို စာသားများ အဖြစ်ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်က အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး တိကျပါတယ်။ အနည်းငယ်သာ အမှားအယွင်း ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အိုကေကို နှိပ်ပြီးရင် ပြုလုပ် ရမယ့် အဆင့် သုံးဆင့်ကို လမ်းညွှန်ပေး ထားပါတယ်။ Google Handwriting Input ကို သင့်ဖုန်းမှာ Enable လုပ်ခိုင်း တာဖြစ်ပြီး အဆင့် တစ်ကို နှိပ်ပြီး Enable လုပ်ပါ။ သင့်ဖုန်းရဲ့ System Language ဟာ English ဖြစ်နေရင် အဆင့်နှစ်ဖြစ်တဲ့ Language ကို ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်တဲ့ အဆင့်ကို အလိုအလျှောက် ပြုလုပ် ပေးမှာပါ။ အဆင့်သုံးမှာတော့ Google Handwriting Input ကို သင့်ဖုန်းရဲ့ Default Keyboard အဖြစ် သတ်မှတ် ခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ Google Handwriting Input ကို စမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့ အဆင့်သုံးအောက်မှ Text Box ကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ Write here ဆိုတဲ့ Box မှာ လက်ချောင်းနဲ့ စာများရေးသား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားရမယ့် ပုံစံကတော့ စကားလုံး တစ်ခုချင်း စီကို ရေးသား ရမှာပါ။ ဥပမာ အားဖြင့် “ How are you? “ လို့ ရေးသား ချင်တယ်ဆိုရင် How လို့ရိုက်ပြီး ခဏစောင့်ပါ။ App က အပေါ်မှာ အကြံပြုချက် သုံးခုကို ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အလယ်မှ အကြံပြုချက်ကို အလို အလျှောက် ရွေးချယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရွေးချယ်တာ မှားနေရင် အကြံပြုချက် ထဲမှ အခြား တစ်ခုကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်နိုင် ပါတယ်။
How လို့ ရိုက်ပြီး ခဏစောင့်ရတဲ့ အချိန်ဟာ အလွန်မြန်တဲ့ အတွက် စောင့်ရတယ် လို့တောင် မထင်ရ ပါဘူး။ How လို့ ရိုက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ အဲဒီ စကားလုံးကို ရှေ့ဘက်ကို ရွှေ့ပြီး Box မှ ဖယ်ရှားပေးလိုက်တဲ့ အတွက် Box မှာ စာရေးသားဖို့ နေရာကျဉ်းကျပ်တဲ့ ပြဿနာကို မတွေ့ရပါဘူး။
နောက်စကားလုံးတစ်ခုအနေနဲ့ are လို့ ရိုက်ရင် အလယ်မှ အကြံပြုချက်မှာ Space သင်္ကေတနဲ့ are ကို ကပ်လျက်ပြသပေး ထားပါတယ်။ App က How နဲ့ are ကြားမှာ Space ခြားရမယ် ဆိုတာကို အလို အလျှောက်သိပြီး ရွေးချယ်ပေးမှာပါ။
ရေးသားပြီးတဲ့ စကားလုံး တစ်ခုကို ဖျက်ချင်ရင် အောက်ခြေရှိ Space Bar ရဲ့ ညာဘက်မှ Backspace Key ကို နှိပ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် Input Box မှာ ညာဘက် ကနေ ဘယ်ဘက်သို့ အလျားလိုက် ပွတ်ဆွဲပြီး လျှင်မြန်စွာ ဖျက်နိုင် ပါတယ်။ စကားလုံး တစ်ခုမှ အက္ခရာ တစ်ခုကိုသာ ဖျက်ချင် ရင်တော့ အောက်ခြေရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်စွန်းမှ Back Button ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် ရေးသား ပြီးတဲ့ စကားလုံးကို ပြန်လည်ပြသ ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အက္ခရာ တစ်ခုကို ဖျက်ချင်ရင် Back Button ကို တစ်ချက်စီနှိပ်ပြီး ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
ညာဘက် အောက်ထောင့်စွန်းမှ Emojis ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး Emojis များ ထည့်သွင်းနိုင် ပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ ဖုန်းမှာတော့ Emojis များထည့်သွင်း ကြည့်တာ အဆင် မပြေပါဘူး။ အွန်လိုင်းမှ Video Review တွေမှာ ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ အဆင်ပြေ တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Emojis များကို လက်နဲ့ ဆွဲပြီး ထည့်သွင်းနိုင် ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် အောက်က ပုံမှာလို ရေးဆွဲ လိုက်ရင် Emoji သုံးခုကို အကြံပြု ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ် ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
အောက်ခြေမှ ကမ္ဘာလုံးပုံကို နှိပ်ရင် ကီးဘုတ်ကို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Space Bar ကို ဖိထားနိုင်ပါတယ်။
Phone ရဲ့ Menu ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး Settings ထဲသွားရင် Input Language နဲ့ Theme ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Auto selection ကတော့ စကားလုံးများကို App က အလိုအလျှောက် ရွေးချယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Default အားဖြင့် ၄၀၀ မီလီစက္ကန့်ကို ထားရှိပေးထားပြီး အဲဒီ Setting က အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Google Handwriting Input ကို Android 4.0.3 နဲ့ သူ့အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အောက်ပါလင့်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Original link - http://www.myanmardigitallife.com/?p=4559
ကဏ္ဍ Phone Application, မိုဘိုင်းဖုန်းလမ်းညွှန်
ဖုန်းလိုင်း ဘယ်လောက် မိတယ် ဆိုတာကို တိတိကျကျ စစ်ဆေးတဲ့ နည်းလမ်း
ဖုန်းလိုင်း ဘယ်လောက် မိတယ် ဆိုတာကို တိတိ ကျကျ သိဖို့ အတွက် ဖုန်းအပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ အတုံးတုံး များက မှန်မှန် ကန်ကန် မဖော်ပြ နိုင်ပါဘူး။ လုံးဝ မမှန်တာ မဟုတ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဖော်ပြမှုက တစ်ခါ တစ်လေမှာ မှားနေ တတ်ပါတယ်။ တစ်တုံးလောက် ပေါ်နေရင်လည်း ဖုန်းကောင်းကောင်း ပြောလို့ ရနေတာမျိုး တွေလည်း ရှိတာကြောင့် သူ့ရဲ့ အမှန်တကယ် အစစ်မှာ ၃ တုံးလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ယင်းကဲ့သို့ မှားယွင်းမှုများ မရှိအောင် စစ်ဆေးတဲ့ နည်းကတော့ Field Test သို့ ဝင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Android မှာဆိုရင်တော့ Setting>About Phone ကနေ ဝင်ပြီးတော့ Network, Status တုိ့မှာ dBm number ကို ပြနေ ပါလိမ့်မယ်။
အိုင်ဖုန်း သမားများအတွက်ကတော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ ကုဒ်ကို နှိပ်ပီးတော့ Dail လုပ်လိုက်ရုံ ပါပဲ။ *3001#12345#* ကို ရိုက်ပြီးတော့ Call ကို Press လုပ်လိုက်ရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ နေရာကို ပြပါလိမ့်မယ်။
လိုင်းဆွဲအား ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာကို တုံးတွေပြနေ ရှိတဲ့ နေရာမှာ သင်္ချာဂဏန်းနဲ့ ပြပါလိမ့်မယ်။ သူက dBm number ဖြစ်ပါတယ်။ – အနောက်က ဂဏန်း သေးလေလေ လိုင်းဆွဲအား ကောင်းလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -60 ရဲ့ လိုင်းဆွဲအားက -70 ထက် ပိုကောင်း ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ တိကျတဲ့ အဖြေကို လိုချင်ရင် Wi-Fi နဲ့ အင်တာနက် data ကို ပိတ်ပြီးတော့ စစ်နိုင်ပါတယ်။ သူက လိုင်းဆွဲအားတင် ပြတာ မဟုတ်ပဲ Telecommunication သမားတွေ အတွက် အရေးပါတဲ့ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးထား ပါတယ။်
ဒါကြောင့်မို့ ပုံမှာ တွေ့တဲ့ ရလဒ်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် မိမိအိမ်မှာနေရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရုံးထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းလိုင်းဆွှဲအား အခြေအနေကို ခွဲခြား စစ်ဆေး နိုင်ပါတယ်။
Original link - http://www.myanmarmobileapp.com/2015/09/14/networkstrength/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, September 15, 2015 No comments:
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အငှားယာဉ်များ ငှားရမ်းရ ခက်ခဲသည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးမည့် Hoho Mobile App အသုံးပြု နိုင်တော့မည်
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အများပြည်သူ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး စနစ်တွင် နေ့စဉ် ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိသည့်
အငှား ယာဉ်များ ငှားရမ်းရ ခက်ခဲသည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အတွက် ပြည်တွင်းအခြေ
စိုက် Myantel Co.,Ltd က Hoho အမည်ရှိ Mobile App တစ်ခုကို ယခုလ ၆ ရက်တွင် စတင်
ဖြန့်ချိတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ကိုဓနက ပြောသည်။
အဆိုပါ Hoho App သည် ခရီးသည် များမှ မိမိ သွားလို သည့် ခရီးစဉ်ကို နီးစပ်ရာ အငှားယာဉ်
မောင်းများထံ Mobile App မှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ခေါ်ယူ ငှားရမ်းနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်
မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုကို အငှားယာဉ်မောင်းနှင့် ခရီးသည်ဘက်မှ နှစ်ဦးစလုံး
အသုံးပြုမှသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်စနစ် ချိတ်ဆက်ထားကာ GPS ထည့်
သွင်း ထားသည့် စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူတိုင်း ထည့်သွင်း ထားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ အငှားယာဉ်ကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်လာပါက အဆိုပါ Mobile App ကို ထည့်
သွင်းထားရုံဖြင့် မိမိနှင့် နီးစပ်သည့် အငှားယာဉ်မောင်းကို ဆက်သွယ်ခေါ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဝန်
ဆောင်ခနှုန်းထားများကို ညှိနှိုင်းနိုင်သည့် Call Button ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုသည် ခရီးသည်များအတွက် အခမဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသော
အငှားယာဉ်မောင်းများအတွက် ခရီးစဉ်တစ်ခုပြီးဆုံးတိုင်း မြန်မာငွေ ၁၀၀ ကျပ်ကို ကောက်ခံ မည်
အဆိုပါ App ကို အသုံးပြုသည့် ခရီးသည်များ အနေဖြင့် ယာဉ်ပေါ်တွင် မိမိနှင့် အတူပါလာသည့်
ပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာ မေ့ကျန်ခဲ့ခြင်းမျိုး ဖြစ်ပေါ် လာပါကလည်း ပျောက်ဆုံးမှု မဖြစ်စေဘဲ ပြန်
လည် ရရှိစေရန် ကုမ္ပဏီဘက်မှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း
ယခုလတ်တလောတွင် အဆိုပါ Hoho App ကို Android OS ထုတ်ကုန်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်
အတွက် Google Play Store တွင် download ရယူသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက် အလက်
များကို http://www.hohotransport.com/ တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, February 07, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ နည်းပညာသတင်း, မိုဘိုင်းဖုန်းလမ်းညွှန်
Viber ကို ကြိုက်ရာ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အသုံးပြုနည်း
Viber ကို တခြားနိုင်ငံ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ဝင်ရောက် အသုံးပြုနည်း....
ဖုန်းခေါ် / ပြောတဲ့ အခါ မိမိက တခြားနိုင်ငံ ရောက်နေ သလို အသုံးပြုနိူင်ပြီး... တစ်ချို့အတွက်လဲ မိမိ ဖုန်းနံပါတ်
နဲ့ မသုံးချင်တဲ့ သူများ အတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိ ကိုယ်ပိုင်ရန် အတွက် မိမိကြိုက်ရာ နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခု ရဖို့ရန် TextFree With Voice ဆော့ဝဲ
ထဲမှာ အကောင့် တစ်ခု သွားဖွင့် လိုက်ရုံပါပဲ ။ မိမိ အတွက် ကြိုက်ရာ နံပါတ် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခွင့် ချပေးမှာ ဖြစ်
ပါတယ် ။ ရွေးချယ်ပြီး ပြီဆိုရင်တော့ တခြားသူက ထိုနံပါတ်ကို ရိုးရိုး Call နဲ့ ခေါ်ရင်တောင် မိမိဆီ ဖုန်းဝင်လာမှာ
ဖုန်း တစ်လုံး ထဲမှာ ကိုယ်ပိုင် ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုနဲ့ အသုံးပြုနိုင် သလို 1500 တန်ကဒ်ကို2သိန်းပေးပြီးလဲ ဝယ်စရာ
ကျနော် US နံပါတ် တစ်ခု ရယူပြီး ဖွင့်ပြထား ပါတယ် US အတွက် ဖြည့်ရမည့် Zip Code ကတော့ 20505 ပါပဲ။
လုပ်နည်း ကလဲ အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ် အောက်မှာ ပုံနှင့် တကွလည်း ပြသ ထားပါတယ် ။
မှတ်ချက် ။ ။ မြန်မာပြည်က ကိုကို မမများနှင့် ဖုန်းနံပါတ် ရွေးချယ်ခွင့် ပေးသော အခါ ထိပ်မှာ +95 ဆိုပြီးဖြစ်နေ
ပါက ဖုန်း Settings >>> Applications Manager >>> Textfree With Voice >>> Clear data ဆိုတာ နှိပ်ပြီး
ဆေးလိုက်ပါ။ ဆေးပြီးတဲ့အခါ ဆော့ဝဲကိုပြန်ဝင်ပြီး မိမိလုပ်ထားတဲ့ နာမည်နှင့် ပတ်စဝတ်ကို ဖြည့်ကာ ဝင်လိုက်
ပါ US နံပါတ် +1 နဲ့ ပေါ်နေတာကို တွေ့ရပါမယ် :)
>> အသုံးပြုတဲ့ အခါ မိမိ Viber မှာ မပေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ရှိပါက ထိုသူထို့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ရှေ့မှာ + ကုဒ် ထည့်
ပေးလိုက်ပါ Viber မှာ ပေါ်လာပါမယ် :)
သဘောက 095555555 ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို မှတ်မယ်ထား ။ +9595555555 ဆိုပြီး ရေးသားရပါမယ် ။ ရှေ့က 0
ကိုဖြုတ်ပြီး +95 ကို ထည့်လိုက်ခြင်းပါ။
အသုံးပြုပုံ ပြုနည်းကို Video နဲ့ ရှင်းပြထား ပါတယ် ။
ဖုန်းနံပါတ် ကိုယ်ပိုင် တစ်ခု ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ မားကပ်မှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။
Apple အတွက်လည်း ဆော့ဝဲတွေ အများကြီးပါပဲ။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော် အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Android
အတွက် တစ်ခု တင်ပေး ထားပါတယ်။ ထိုဆော့ဝဲ အပြင် မားကပ်မှာ TxetPlus ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲနှင့် အသုံးပြု နိုင်ပါ
တယ် :) TextFree With Voice ဆော့ဝဲကို အောက်မှာ ကြိုက်ရာ လင့်ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် :)
TextFree With Voice V2.0.2 ကို Dev-Host လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို Zippyshare လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို Uploadmb လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို FileDropper လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို Tiny လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို FilePup လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို dataFile Host လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို Mega လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို FileSwap လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို YourFileLink လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို FileCargo လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို SpeedyShare လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
TextFree With Voice V2.0.2 ကို Solidfiles လင့်ဖြင့် ဒေါင်းယူရန်။
အဆင်မပြေမှုများ ရှိပါက မေးမြန်းလိုပါက ( သို့ ) ဒေါင်းလော့လင့်များ ဒေါင်းမရတော့ပဲ သေသွားခဲ့ပါက။ MyanmarMobileForum(MMF) ဂရုမှာ လာရောက်မေးမြန်း တောင်းဆိုနိူင်ပါတယ်။ မန်ဘာဝင်ထားကြဖို့လဲ
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ... :)
From : Free Mobile Sharing
ကဏ္ဍ Phone Application, viber, ဖုန်းနည်းပညာ, မိုဘိုင်းဖုန်းလမ်းညွှန်
telenor လက်​ကျန်​​ငွေ လွှဲ​ပြောင်းခြင်းနှင့် အင်တာနက် SETTÌNG ချိန်​ရန်
တယ်လီနော ဖုန်းတစ်လုံးမှ အခြားတယ်လီနောဖုန်း တစ်လုံးသို့ လက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။
☺ - သင့်တယ်လီနောဖုန်း ထဲမှ လက်ကျန်ငွေအား အခြားတယ်လီနောဖုန်း အသုံးပြုသူထံ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်
☺ - ကျပ် ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ကြားထိ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
☺ - လက်ခံရရှိသူအတွက် ရရှိသော ပဏာမကို အသုံးပြုရမည့် အချိန် သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။
☺ - လွှဲပြောင်းပေးသူထံမှ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ပဏာမ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
☺ - အသုံးပြုရန် *979# သို့ ခေါ်ဆိုပြီး ညွှန်ကြားချက်များ အတိုင်း ခေါ်ဆိုပါ။
ဒါကတော့ TELENOR INTERNET SETTÌNG ချိန်​ရန်​ အတွက်​ပါ။
အောကမှာ ပုံ​လေး​တွေနဲ့ ​ဖော်​ပြ​ပေး လိုက်​ပါတယ်​။
From : Pyae Phyo (MMiTD) by လွမ်းသူ